မျက်ခုံးရိတ်တဲ့ သင်တုန်းဓားမကိုင်ခင် သိသင့်တဲ့အချက် ၄ ချက် -
Posted on December 11, 2018 May 16, 2019 Author Hnin Ei Oo	Comment(0)
မျက်ခုံးရိတ်လိုက်တိုင်း ဘယ်တစ်မျိုးညာတစ်ဖုံ ဖြစ်နေတုန်းလား 🙄
ဟိတ် မျက်ခုံးတွေနှုတ်ရတာ၊ အပ်ချည်နဲ့ အမြစ်က ဆွဲဖြုတ်ရတာတွေက မျက်လုံးနားတစ်ဝိုက် အရေပြားတွေကို ဆွဲဆွဲခွာနေသလို ခံစားစေတော့ အရမ်းနာလာလို့ဆိုပြီး မျက်ခုံးရိတ်ဖို့ စဉ်းစားနေပြီလား? အမှန်တကယ်တော့ အဲဒီလိုရိတ်တယ်ဆိုတာလည်း ကြည့်တော့သာ လွယ်လွယ်လေး၊ အချိန်လည်းသိပ်မကုန်ဘူးဆိုပြီး သက်သာမယ်လို့ ထင်ရပေမဲ့ တကယ်တမ်းကျတော့ ထင်သလောက် အဆင်မပြေပါဘူး။ ဒါကြောင့် အဲဒီသင်တုန်းဓားကိုင်ထားတဲ့ လက်ကို အောက်လေးခဏချပြီး ဒီဆောင်းပါးလေးကို အရင်ဖတ်ကြည့်နော်။
မျက်ခုံးနားတစ်ဝိုက်က အရေပြားပါးလို့ ထိလွယ်ရှလွယ်တယ်။
စဉ်းစားကြည့်ယောင်း ဒီအရေပြားပါးပါး နုနုလေးပေါ်မှာ ဓားတင်ပြီး ရိတ်ရမှာဆိုတော့ ဓားနဲ့များခြစ်မိရင်တော့ အမလေး။ ပြီးတော့ ခြစ်မိသွားတာက အရမ်းအရေးမကြီးသေးဘူး ခြစ်ပြီးရလာမယ့်ဒဏ်ရာက မျက်နှာပေါ်မှာဆိုတော့ ဖုံးမရပြုမရနဲ့ တစ်ပတ်ဆယ်ရက်လောက် တိုင်ပတ်နေရဦးမှာ။
Related Article >>> မျက်ခုံးပုံသွင်းတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ယောင်းတို့ မသိသေးတဲ့အချက်တွေ …
မျက်ခုံးရိတ်တာကလေ ဓားလေးတဂျိဂျိနဲ့ နည်းနည်းပါးပါး ဟိုလုပ်ဒီလုပ် လုပ်ပြီးတာနဲ့ ပြီးသွားပြီလို့ထင်ရပေမဲ့ တကယ်တမ်းကျတော့ တခြားနှုတ်တာ၊ အမွေးချွတ်တာတွေထက်ပိုပြီး တာဝန်ကြီးပါတယ်။ ကိုယ်မရိတ်ခင်မှာ မျက်ခုံးကိုနေရာကျအောင် vaseline ဒါမှမဟုတ် အမွေးရိတ်ခရင်မ်နဲ့ အရင်နေရာတကျဖြစ်အောင် ပုံသွင်းထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ မျက်ခုံးနှစ်ဖက် တောင်တစ်လမ်းမြောက်တစ်လမ်းတွေ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
ပြန်ထွက်လာတဲ့ မျက်ခုံးငုတ်စိတိုတွေက အရမ်းစိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်စရာကောင်းတယ်။
အမွေးဆိုတဲ့အမျိုးကလေ ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသ ဘယ်ရပ်ကွက်ကဟာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခါရိတ်ပြီးတာနဲ့ အမွေးကြမ်းကြမ်းတွေ ထွက်လာတတ်ပြီး အခန့်မသင့်ရင် အသားပတ်သလို အရေပြားတွေပါ အက်ကွဲသွားစေတတ်ပါသေးတယ်။ နောက်ပြီး ရိတ်ပြီးပြန်ထွက်လာတဲ့ အမွေးငုတ်စိတွေကလည်း ထွက်စမှာ ယားယံစေပြီး ထိုးထိုးထောင်ထောင်နဲ့ ကြည့်ရတာတော့ နည်းနည်းဆိုးစေပါတယ်။
Related Article >>> အပ်ချည်တစ်မျှင်သာ လိုပါတယ်
အချိန်မရှိလို့ မျက်ခုံးကို ကောက်ရိတ်လိုက်တယ်ပေါ့? ပြောပါဦး ခဏခဏအချိန်ပေးပြီး ပြန်ပြန်ရိတ်နေရတဲ့ အကြောင်းလေး… ကိုယ့်မှာတော့ အချိန်မရှိတဲ့ကြားက တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ညီအောင် သေချာမျက်လုံးကြီး ပြူးပြီး မနည်းရိတ်လိုက်ရပေမဲ့ ၃ ရက်လောက်လည်းကြာရော ဟိုတစ်ကွက်ဒီတစ်ကွက်နဲ့ ကွက်ကြားမိုးရွာပြီး ပြန်ပေါက်လာတော့ အိုင်ကဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲပြောကြည့်။
ဒါပေမဲ့လည်း ဒီလိုတာဝန်ကြီးတဲ့အလုပ်ကို စွန့်စွန့်စားစားနဲ့ လက်ရဲဇက်ရဲ တစ်ဇွပ်ဇွပ်ရိတ်ရိတ်နေတာ ဘယ်သူလို့ထင်လဲ? နှင်းလေ နှင်းပေါ့ :’) နှင်းကတော့ ရိတ်နေကျမို့လားမသိဘူး ဘယ်နေရာဘယ်လို ထွက်တတ်တယ်ဆိုတာ သိနေလို့ မျက်ခုံးကို နေရာချပြီး လိုတဲ့နေရာတွေ ရိတ်ချထည့်လိုက်တာပဲ။
ခဏခဏပြန်ပြန်ရိတ်ရပေမဲ့ နှင်းအတွက်တော့ တော်တော်အဆင်ပြေလို့ ဒီနည်းပဲသုံးပါတယ်နော်။ အာ့ကြောင့် ယောင်းတို့လည်း စစချင်းရိတ်လို့ မကျွမ်းကျင်သေးတဲ့အချိန်မှာ အချိန်ပေးပြီး သေချာရိတ်ပါ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အဆင်ပြေလာရင်တော့ အေးဆေးမှန်းဆပြီးတော့သာ ရိတ်ထည့်လိုက်တော့အေ။ ရိတ်ပြီးရင်တော့ ရေဓာတ်ဖြည့်ခရင်မ်လေး ဖြစ်ဖြစ်၊ ရှားစောင်းလက်ပတ်လေးဖြစ်ဖြစ် လိမ်းပေးပါ။ ဒါဆို အသားအရေ နီမြန်းတာ၊ ပွန်းတာတွေလည်း မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။
မကျြခုံးရိတျလိုကျတိုငျး ဘယျတဈမြိုးညာတဈဖုံ ဖွဈနတေုနျးလား 🙄
ဟိတျ မကျြခုံးတှနှေုတျရတာ၊ အပျခညျြနဲ့ အမွဈက ဆှဲဖွုတျရတာတှကေ မကျြလုံးနားတဈဝိုကျ အရပွေားတှကေို ဆှဲဆှဲခှာနသေလို ခံစားစတေော့ အရမျးနာလာလို့ဆိုပွီး မကျြခုံးရိတျဖို့ စဉျးစားနပွေီလား? အမှနျတကယျတော့ အဲဒီလိုရိတျတယျဆိုတာလညျး ကွညျ့တော့သာ လှယျလှယျလေး၊ အခြိနျလညျးသိပျမကုနျဘူးဆိုပွီး သကျသာမယျလို့ ထငျရပမေဲ့ တကယျတမျးကတြော့ ထငျသလောကျ အဆငျမပွပေါဘူး။ ဒါကွောငျ့ အဲဒီသငျတုနျးဓားကိုငျထားတဲ့ လကျကို အောကျလေးခဏခပြွီး ဒီဆောငျးပါးလေးကို အရငျဖတျကွညျ့နျော။
မကျြခုံးနားတဈဝိုကျက အရပွေားပါးလို့ ထိလှယျရှလှယျတယျ။
စဉျးစားကွညျ့ယောငျး ဒီအရပွေားပါးပါး နုနုလေးပျေါမှာ ဓားတငျပွီး ရိတျရမှာဆိုတော့ ဓားနဲ့မြားခွဈမိရငျတော့ အမလေး။ ပွီးတော့ ခွဈမိသှားတာက အရမျးအရေးမကွီးသေးဘူး ခွဈပွီးရလာမယျ့ဒဏျရာက မကျြနှာပျေါမှာဆိုတော့ ဖုံးမရပွုမရနဲ့ တဈပတျဆယျရကျလောကျ တိုငျပတျနရေဦးမှာ။
Related Article >>> မကျြခုံးပုံသှငျးတာနဲ့ ပတျသကျပွီး ယောငျးတို့ မသိသေးတဲ့အခကျြတှေ …
မကျြခုံးရိတျတာကလေ ဓားလေးတဂြိဂြိနဲ့ နညျးနညျးပါးပါး ဟိုလုပျဒီလုပျ လုပျပွီးတာနဲ့ ပွီးသှားပွီလို့ထငျရပမေဲ့ တကယျတမျးကတြော့ တခွားနှုတျတာ၊ အမှေးခြှတျတာတှထေကျပိုပွီး တာဝနျကွီးပါတယျ။ ကိုယျမရိတျခငျမှာ မကျြခုံးကိုနရောကအြောငျ vaseline ဒါမှမဟုတျ အမှေးရိတျခရငျမျနဲ့ အရငျနရောတကဖြွဈအောငျ ပုံသှငျးထားဖို့ လိုအပျပါတယျ။ မဟုတျရငျတော့ မကျြခုံးနှဈဖကျ တောငျတဈလမျးမွောကျတဈလမျးတှေ ဖွဈသှားတတျပါတယျ။
ပွနျထှကျလာတဲ့ မကျြခုံးငုတျစိတိုတှကေ အရမျးစိတျအနှောကျအယှကျ ဖွဈစရာကောငျးတယျ။
အမှေးဆိုတဲ့အမြိုးကလေ ဘယျနရောဘယျဒသေ ဘယျရပျကှကျကဟာပဲဖွဈဖွဈ တဈခါရိတျပွီးတာနဲ့ အမှေးကွမျးကွမျးတှေ ထှကျလာတတျပွီး အခနျ့မသငျ့ရငျ အသားပတျသလို အရပွေားတှပေါ အကျကှဲသှားစတေတျပါသေးတယျ။ နောကျပွီး ရိတျပွီးပွနျထှကျလာတဲ့ အမှေးငုတျစိတှကေလညျး ထှကျစမှာ ယားယံစပွေီး ထိုးထိုးထောငျထောငျနဲ့ ကွညျ့ရတာတော့ နညျးနညျးဆိုးစပေါတယျ။
Related Article >>> အပျခညျြတဈမြှငျသာ လိုပါတယျ
အခြိနျမရှိလို့ မကျြခုံးကို ကောကျရိတျလိုကျတယျပေါ့? ပွောပါဦး ခဏခဏအခြိနျပေးပွီး ပွနျပွနျရိတျနရေတဲ့ အကွောငျးလေး… ကိုယျ့မှာတော့ အခြိနျမရှိတဲ့ကွားက တဈဖကျနဲ့တဈဖကျညီအောငျ သခြောမကျြလုံးကွီး ပွူးပွီး မနညျးရိတျလိုကျရပမေဲ့ ၃ ရကျလောကျလညျးကွာရော ဟိုတဈကှကျဒီတဈကှကျနဲ့ ကှကျကွားမိုးရှာပွီး ပွနျပေါကျလာတော့ အိုငျကဘယျလိုလုပျပေးရမလဲပွောကွညျ့။
ဒါပမေဲ့လညျး ဒီလိုတာဝနျကွီးတဲ့အလုပျကို စှနျ့စှနျ့စားစားနဲ့ လကျရဲဇကျရဲ တဈဇှပျဇှပျရိတျရိတျနတော ဘယျသူလို့ထငျလဲ? နှငျးလေ နှငျးပေါ့ :’) နှငျးကတော့ ရိတျနကေမြို့လားမသိဘူး ဘယျနရောဘယျလို ထှကျတတျတယျဆိုတာ သိနလေို့ မကျြခုံးကို နရောခပြွီး လိုတဲ့နရောတှေ ရိတျခထြညျ့လိုကျတာပဲ။
ခဏခဏပွနျပွနျရိတျရပမေဲ့ နှငျးအတှကျတော့ တျောတျောအဆငျပွလေို့ ဒီနညျးပဲသုံးပါတယျနျော။ အာ့ကွောငျ့ ယောငျးတို့လညျး စစခငျြးရိတျလို့ မကြှမျးကငျြသေးတဲ့အခြိနျမှာ အခြိနျပေးပွီး သခြောရိတျပါ။ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ အဆငျပွလောရငျတော့ အေးဆေးမှနျးဆပွီးတော့သာ ရိတျထညျ့လိုကျတော့အေ။ ရိတျပွီးရငျတော့ ရဓောတျဖွညျ့ခရငျမျလေး ဖွဈဖွဈ၊ ရှားစောငျးလကျပတျလေးဖွဈဖွဈ လိမျးပေးပါ။ ဒါဆို အသားအရေ နီမွနျးတာ၊ ပှနျးတာတှလေညျး မဖွဈတော့ဘူးပေါ့။
Tagged Before, eyebrow, know, Pros and Cons, razor, shaving, tips, to
Posted on March 26, 2017 Author Christina Rosy
ယောင်းယောင်းတို့ရဲ့နှားခေါင်းပေါ်၊ မေးစေ့ပေါ်တက်ထိုင်နေတဲ့ ဆားဝက်ခြံတွေကို ဖြတ်ခနဲပျောက်စေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း (၆)မျိုးပါ။
အပူချောင်းမလိုတဲ့ ဆံပင်ကောက်နည်း (၅)မျိုး
Posted on June 8, 2018 July 25, 2018 Author Hnin Ei Oo
ဆံပင်ကောက်တဲ့အခါ အပူချောင်းမဖြစ်မနေလိုတယ်လို့ ဘယ်သူပြောလဲ?
မိတ်ကပ်ဘရပ်ရ်ှတွေကို ဘာကြောင့် ဝယ်သင့်တာလဲ?
Posted on December 3, 2018 Author Hnin Ei Oo
တန်တယ်မတန်ဘူး စဉ်းစားနေရင်တော့ မင်းနောင်တကောင်းကောင်းရတော့မယ် ကောင်မလေး…
အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်တွေအကြောင်း ယောင်းတို့ ဘယ်လောက်သိလဲ
ကိုယ့်ကို တခြားသူတွေ သတိထားမိလာအောင် လုပ်တတ်သူ (Attention Seekers) တို့ရဲ့ အမူအကျင့်များ